Savin - Cook, Savin Kuk - Zabljak
Eoropa Montenegro Zabljak
Adiresy: Durmitor, Crna Gora
Height above sea level: 2312 m
Savin-Cook dia tendrombohitra tampoka any Montenegro , ao amin'ny faritanin'i Durmitor National Park . Tsy ilay avo malemy indrindra eto amin'ny firenena , fa iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny mpizaha tany, satria manome fomba fijery tsara momba ny Lemak'i Lake, Bear Peak, ny Tendrombohitra Lehibe sy Malemy. Ireo fomban-tany izay manokatra ny fomba fijerin'ity tendrony ity dia karazana "marika" an'ny National Park sy Montenegro manontolo, matetika izy ireo no aseho amin'ny bokotra rehetra fanaovana dokam-barotra. Ankoatra izany, fantatra amin'ny fiara fitaterana ny tendrombohitra.
Ny anaran'i Mount Savin-Cook dia nomena ho fanomezam-boninahitra an'ilay printsy Serba Rastko Nemanich, izay nomena anarana hoe Savva, iray amin'ireo olo-masina malaza indrindra ao amin'ny Fiangonana Ortodoksa Serba. Araka ny hevitr'ilay tantara, teto Savva dia niorina an-tanindrazana mba hisaintsaina sy hivavaka. Ankoatra izany, ny mpino nahita ny loharano, ny rano izay, raha ny lohataona, aorian'ny dian-dranomandry, dia manasitrana ny toetra. Ny lohataona dia mitondra ny anaran'i Sawa.
Miakatra ny Savin-Cook
Savin-Cook dia tampoka malaza amin'ny fiakarana. Misy lalana maromaro amin'izany. Ny fandevenana malaza indrindra dia manomboka avy any amin'ny Black Lake , mandalo amin'ny loharanon-kevitra Izvor, Tochak ary Polyany Mioch. Avy eo ireo mpandeha dia mandalo amin'ny loharano ao Savina ary manomboka ny fiakarana mankany amin'ny tampony.
Ny fahasamihafana eo amin'ny làlan-dàlana amin'io lalana io dia manodidina ny 900 m. Ny dia iray dia mandeha mandritra ny 4 ora. Ny lalana dia somary tsy takatry ny saina, ary mihanika ny taona isan-taona, saingy any amin'ny fararano amin'ny fararano sy ny ririnina dia misy rivotra mahery be eto, eny am-pandehanana ny lanezy, indraindray tena lalina, ary any ambony avo dia avo ny mari-pahaizana rivotra. Ny fotoana tsara indrindra ho an'ny fiakarana dia ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra.
Ny ivontoerana ski ski Savin-Kuk no iray amin'ireo sarobidy indrindra amin'ny Balkana, na izany aza dia manome lalana maro samihafa sy tsara kalitao izy. Misy fialan-tsasatra ho an'ireo izay vao tonga tao anaty ski (anisan'izany ny lalan'ny ankizy tsirairay), ary faran'izay ratsy. Misy làlan-dàlana sasantsasany amin'ny alina.
Ny halavan'ny dia ny lalana bisikileta lava indrindra dia 3,5 km. Ny halavan'ny totalin'ny lalana dia manodidina ny 12 km. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 750 m. Misy lalao baolina kitra ihany koa.
Ny fanodinana dia miasa mandritra ny taona, satria tsy ny mpanararaotra amin'ny ski fotsiny ihany no mampiasa izany, fa ireo izay te hankafy ny fomba fijery tsara avy any an-tampony, saingy tsy maniry na tsy mahavita mitaingina tongotra. Ny fiara fitaterana dia manomboka miasa amin'ny 9:00, indraindray - raha maro ny olona te-hiakatra - aloha. Ny tapakila dia mitentina 7 euros.
Ahoana ny fandehanana any amin'ny ski lift?
Ny halaviran-dalana avy amin'ny tanànan'i Zabljak mankany amin'ny ski lift dia 4 km. Afaka mankany amin'ny P14 ianao ao anatin'ny 10-12 minitra. Afaka misafidy lalana hafa ianao - voalohany mankany Tripka Džakovića, ary manohy mandeha fiara amin'ny P14, amin'ity tranga ity dia haharitra 13 minitra ny lalana. Ny Taxi dia handoavana ny 5-6 euros. Afaka mandeha ianao ary mandeha, ny lalana dia tokony ho 40 minitra.
Canyon avy any Komarnitsa
Ny katedraly ao Palma
Tendrombohitra Velika Planina
Ny Ivotoerana Peace Nobel
Zanak'i Monica Bellucci
Tatoazy mainty sy fotsy
Yoga ho an'ny fatiantoka mavesatra
Masoivohon'i Liechtenstein any Rosia
Ny akanjo silamo Al-Barakat
Overdose fanafody fitsangantsanganana
Salady misy voankazo masira - tsotsotra tsotra sy mahazatra ho an'ny tsirony rehetra!
Ny sakafo mahavelona ho an'ny fatiantoka haingana
Tranon'ny seza misy ravina
Krôlojatra amin'ny fomba fijerin'ny floristik
Ny aretina ficus
Nahoana no nofinofy ny fiaramanidina?
Mamono pantalonina amin'ny vokatra amin'ny sauna
Zephyranthes - fikarakarana tokantrano
Inona no atao hoe Maria